Kwenzekani kuma-Olimpiki ka-2012? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Isheduli ka-2012 yama-olympic - izixazululo ezintsha
Isheduli ka-2012 yama-olympic - izixazululo ezintsha
Kwenzekani kuma-Olimpiki ka-2012?
Ku-2012 eLondonwaba yidolobha lokuqala ukusingatha le midlalo yanamuhla kathathu, phambilini yayiyindawo ye-1908 ne-1948OlimpikiImidlalo. Isikebhe esinejubane esithwele ifayela le-Olimpikiilangabi lehla eMfuleni iThames njengoba iziqhumane ziqhuma ngaphezu kweTower Bridge phakathi nemikhosi yokuvula yeILondon 2012 OlimpikiImidlalo.
Enye yezindikimba ezisemqoka kubabolekisi abafuna ukusingatha imidlalo yama-Olimpiki ka-2012 kwakuwuhlelo lwefa oluthembisa ukuvuselela indawo enamanzi e-East London nokukhuthaza isizukulwane esazi ukwehluleka kwamanye ama-Olimpiki angaphambilini, lapho izinkundla seziphenduke izindlovu ezimhlophe, lapho Amapaki ama-Olimpiki asephenduke amathafa angenamuntu, iLondon yathembisa ukudala umphakathi omusha onohlonze, yize imidlalo yama-2012 ngokungangabazeki yayiyimpumelelo kwezemidlalo. Lena yi-Olympiad okufanele yahlulelwe ngefa layo eminyakeni emihlanu ngemuva kweMidlalo esinawo i-SK inqubekelaphambili eseyenziwe ekushintsheni iwebhusayithi yalo mcimbi owodwa wezemidlalo waba ngomunye wemiphakathi emisha yaseLondon isikhathi sangemva konyaka ka-2004 Ukudlala ngezindleko ezinkulu ekusingatheni ama-Olimpiki asehlobo kwagcizelelwa kakhulu ukuthi indawo yaseLondon izohlanganiswa kanjani nedolobha ngemuva komcimbi. Imisebenzi yathuthukiswa lapha.
Sithatha uhambo lokuzungeza i-Olympic Parksite ukubona ukuthi lezi zinhlelo zingena kanjani ku-Isiza esiyinhloko seMidlalo siphendulwe indawo yomphakathi enkulu ukwedlula umhlaba waseMonaco manje osubizwa nge-Queen Elizabeth Olympic Park. Le ndawo yepaki elingamakhilomitha-skwele angu-2.5 yavulwa kabusha ngemuva konyaka iMidlalo iphelile futhi yasetshenziswa kahle ngabantu bendawo futhi yabamba imicimbi eminingi ngonyaka wokuqala ipaki lamukela izivakashi eziyizigidi ezingama-3.9 futhi kuze kube namuhla ngaphezulu kwabantu abayizigidi eziyi-15 abantu abayizigidi ezimbili beze endaweni entsha ngokushesha ngemuva imidlalo amapaki asusiwe ngamanani esikhashana Inkundla yamanzi yamanzi iye yahlakazwa yabuyiselwa ekuhlinzekweni kwezimpahla Ngenkathi inkundla yebhasikidi idilizwa ngaphambi kokuba izihlalo zayo zifakwe kwi-Valleyhockey neTennis Centre entsha eminyakeni emihlanu ngemuva kweMidlalo, Zonke izindawo eziyisishiyagalombili ezingapheli e-Olympic Park zinefa eliphephile, zivulekile futhi ziyasebenza, kuyilapho i-Olympic Stadium bekuyiyona ndawo ebiyisisekelo seMidlalo, uhlelo lwayo lwamafa lwatholakala ngemuva konyaka wezi-2012. ithrekhi nenkundla yezinkundla ezinikele, inkundla yaba nempikiswano njengekhaya leqembu lePremier League iWest HamUnited, ngezinto ezikhokha u- £ 2 million ngonyaka ukusebenzisa umsebenzi wokulungisa isakhiwo ukwenza inkundla ilungele ibhola ebiza ama- £ 300 million kanye Amandla ancishisiwe kusuka ku-80 kuya ku-54,000 Uphahla lwangempela namaphaneli amancane akhanyisiwe kwafakwa uphahla olusha unomphela oluhlanganisa zonke izihlalo endaweni.
Kwaphinde kwafakwa nohlelo lokuhlala olusebenzayo, oluvumela inkundla ukuthi iqhubeke nokusingatha imicimbi yezemidlalo futhi ilethe abalandeli enkundleni lapho belungiselelwe ibhola, abantu abayizinkulungwane ezinhlanu babe ngamahora ayizigidi ezimbili ukuqeda ukulungiswa okwenziwe baqinisekisa ukuthi inkundla yinde ukusebenza kwesikhathi ngenkathi kuyigcina njengendawo yemincintiswano yethrekhi nensimu yase-UK. Kusukela kule Midlalo yango-2012, le ndawo isingathe imicimbi ehlukahlukene yezemidlalo, kubandakanya imidlalo emihlanu yeNdebe Yomhlaba Yerugby, imicimbi eminingi yamathrekhi nezinkundla, kanye nemidlalo yamazwe omhlaba yeRugbyLeague. Ukusingathwa kwebhola le-ham nemicimbi yesimanje yokubiyela i-pentathlon ngesikhathi semidlalo, ibhokisi lethusi lithathwa njengeliguquguquka kakhulu kusukela ekuqaleni Indawo eyenzelwe.
Isakhiwo asithathi msebenzi omncane ukushintshela kumodi yeLifa, futhi indawo yokuqala yavulwa eQueen Elizabeth Olympic Park unyaka owodwa ngemuva kweMidlalo. ICopper Box iyinkundla yesithathu ngobukhulu yaseLondon futhi, enezihlalo eziyizinkulungwane eziyisikhombisa nengxenye ezihlehlekayo, ilungele imiqhudelwano yezemidlalo yezwe lonke ekhombisa imibukiso yamakhonsathi nezingqungquthela njengendawo yokuzivocavoca esezingeni eliphezulu lapho iLondon Lions idlala khona basketball futhi ube nezivakashi ezingaphezu kwesigidi esisodwa selokhu savulwa kabusha. Ukuguquguquka komklamo wayo kwenza ibhokisi lezokuxhumana libe yisibonelo sendlela yokuhlela impilo yangemva komdlalo.
itende lokuhamba ngebhayisikili
Enye yezindawo ezivelele kakhulu emidlalweni ka-2012, i-Aquatic Centre, eyadalwa ngumufi uTsar Hadid, yaguqulwa yaba yichibi lokubhukuda lomphakathi, futhi kwagxekwa amaphiko angakwazi ukumelana namaqhuqhuva esikhashana ephephabhuku elihleli phansi asuswa ukunciphisa amandla endawo 17,500 kuya ezinkulungwaneni ezimbili nohhafu ezilawuleka kakhulu. Selokhu lavulwa ngoMashi 2014, abantu abangaphezu kwezigidi ezi-2,5 bavakashele elinye lamachibi omphakathi ahlaba umxhwele emhlabeni futhi bathola izindondo zeThimba GB eziningana ngesikhathi iVelodrome ivulwa kabusha ngo-Ephreli 2014 njengendawo ephambili yeLee Valley VillaPark.
Le ndawo iyaqhubeka nokusingatha imicimbi emikhulu yamabhayisikili yamazwe omhlaba, kuyilapho ingxenye yeVelo iyisikhungo somphakathi sokugijima emigwaqeni, iBMX nokuhamba ngebhayisikili ezintabeni, kanti izindlu sezilethwe ngokuguqulwa komuzi wabasubathi bangaphambili waba yi-EastVillage, okuzobe kuyikhaya kubasubathi abayizinkulungwane eziyishumi ezinkulungwaneni zeMidlalo Manje eyenziwe kabusha, izindlu ezingama-2818, eziyi-1439 ezingabizi kubo x izindlu eziyizinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, eyokuqala yalezi zindawo ezisenyakatho-mpumalanga yepaki ibizwa ngokuthi yiCobham Manoronce, kuzoba nezindlu ezintsha ezingama-828 nemindeni engama-75% eyakhiwe futhi cishe ingxenye yesithathu ebizwa ngokuthi Izakhamuzi zokuqala ezingabizi zaqala ukuthuthela kule ndawo ngo-2015 futhi isikole esisha, iFood Chopper Academy, sizovulwa esakhiweni esizoqhubeka nokusetshenziswa njengendawo yokuzivocavoca nokuphepha ngesikhathi semidlalo , futhi iCsaba Manor izolandela ukwakhiwa kwamakhaya angama-870 e-Eastwick kanye namakhaya ayi-650 ahlanzekile e iqhubekele phambili ngeminyaka eyisithupha, nokwakhiwa kuhlelwe ukuthi kuqale ngo-2017 nokusolwa ngomlilo rst abahlali, abangena ngo-2023 Ukwakhiwa kwezigayo ezingama-1,300 zaseHomesat pudding eningizimu yendawo kanye no-780 eStratford Waterfront eduze ne-Aquatic Center kuzophinde kuqale eminyakeni eyishumi ezayo yeMedia centre ngokuxhumeka kanye nolwazi lwe-IT lokwakha izakhiwo zemidlalo i-boob siguqulwe saba yidijithali esizungeze esinye sezikhungo ezinkulu kakhulu zedatha eLondon, manje sesiyisisekelo esikhangayo sabaqashi abaziwayo njengeBT ezemidlalo nokuqala okuncane kokuhlela okuhle nokugxila kokuzibophezela kuleyo Legacies kusukela ekuqaleni kuqinisekisile ukuthi indawo yama-Olimpiki yaseLondon ayizange ifane nesiphetho semidlalo ethile yangaphambilini yama-Olimpiki. I-QueenElizabeth Olympic Park isivele isiyisikhungo sezemidlalo nezokungcebeleka, njengoba izindawo eziphambili ze-Aquatic Center Velodrome neCopper Box ziqiniswe kahle zinamagumbi afinyeleleka esidlangalaleni, okuheha izigidi zezivakashi minyaka yonke ukuthi ngabe le ndawo iyayifeza yini inhloso yayo yokuba yintsha entsha I-London yasedolobheni izoncika entuthukweni yesikhathi esizayo kanye nezindawo zayo zokuhlala ezintsha, yize izindlu eziningi sezihleliwe, amanani akhuphukayo kanye nezindawo zokuwa ezingabizi kakhulu zenze abanye bathi abantu bendawo bakhishwe kule miphakathi emisha kwenzeka okwenzekayo kubonakala sengathi izinto zingakwesokudla landelela ukuthi ngabe uyithokozele le ndatshana futhi ufuna ukuthola okungaphezu kwesiteshi se-athikili esichazayo sokwakhiwa bhalisela i-b1m
Yabanjelwa kuphi i-Olimpiki ka-2012?
Ngubani owagijima ama-Olimpiki ka-2012?
ILondon2012Imidlalo ibigxile kuzungeze i-OlimpikiIpaki ese-East London, okuyindawo yezindawo eziningi zezemidlalo. Kuze kwafika izibukeli ezifika ku-180,000 ngosuku zingena ePaki ukujabulela le Midlalo, okwenza kwaba ngukugxila okuyinhloko kweOlimpikiumsebenzi.
Ngubani owine ama-Olimpiki Asehlobo ka-2012?
I-United States (USA)
Ngabe iNgilandi yenze kanjani kuma-Olimpiki ka-2012?
KuhleIBrithaniliqede ihloboOlimpikiImidlalo enezindondo ezingama-65 sezizonke (29 igolide, isiliva elingu-17, nethusi eli-19), iphuma endaweni yesithathu ekuklelisweni kwetafula lezindondo, neyesine enanini eliphelele lokukleliswa kwezindondo. Abadlali abayishumi nambili baseBrithani banqobe ngaphezu kweyodwaOlimpikiindondo kuILondon.
Liyini ifa leMidlalo yama-Olimpiki yaseLondon ngo-2012?
I-ILifa lika-2012 lama-Olimpikiizinzuzo nemiphumela yesikhathi eside yokuhlelela, ukuxhasa ngemali, ukwakha kanye nokubeka ezingeni le-OlimpikineParalympicImidlaloehlobo2012. Ichazwa ngokuhlukahlukene njenge: ukwesekwa kwezomnotho imisebenzi emisha namakhono, ukukhuthaza ukuhweba, utshalomali lwangaphakathi kanye nezokuvakasha.
seattle kuya ePortland ngebhayisikili yakudala
Wayeneminyaka emingaki umgijimi omncane kumdlalo wamanqamu wama-Olympic ngo-2012?
I-omncane kunabo bonkeowayebambe iqhaza emncintiswaneni wezokusubatha kwakungu-Andorran oneminyaka engu-15-okudalaUCristina Llovera ngenkathi endala kuneminyaka engu-46-okudalaI-Ukrainian Oleksandr Dryhol. Umdlali waseNingizimu Afrika u-Oscar Pistorius waba ngumgijimi wokuqala oshunqulwe isitho ukuncintisana e-Ama-Olimpiki.
Ngabe uMissy Franklin usabhukuda?
I-Olympic Gold MedalistUMissy Franklinuthathe umhlalaphansi ngokusemthethweni kwiTeam USA eneminyaka engama-23. Eminyakeni emithathu kamuva,Missyihlala intanta. Ungamthola echibini, kepha akuyenaukubhukudaingane.18 2021.
Ubani umuntu omncane kunabo bonke owake wancintisana kuma-Olimpiki?
Ngaphambi kweTokyoAma-Olimpikikuhlehlisiwe, uSky Brown ekuqaleni wayehlelelwe ukwenza le Midlalo eneminyaka engu-12 ubudala. I-Team Great Britain ine-Olympian entsha ezokwengeza ohlwini lwayo, futhi yiyoomncane kunabo bonkeumsubathi kuyanjalobamele iqembu ehloboAma-Olimpiki.02.07.2021
Ngubani owathola indondo yegolide kuma-Olympic 2012?
IGreat BritainU-Andy Murraywehlule uFederer kowamanqamu, 62, 61, 64, ukuwina indondo yegolide, eguqula ukuhlulwa okwanikwa lowo ophikisana naye kuleyo nkantolo emasontweni amane edlule kowamanqamu wabesilisa abangabodwana eWimbledon.
Wawuphi umcimbi wokuvula ama-Olimpiki ka-2012?
Umcimbi wokuqala, isigaba seqembu ebholeni labesifazane, uqale ngomhlaka 25 Julayi eMillennium Stadium eCardiff, kwalandelwa yimikhosi yokuvula ngomhlaka 27 Julayi. Abasubathi abangu-10 768 abavela kumaKomidi Kazwelonke Ama-Olimpiki Kazwelonke (ama-NOC) ababambe iqhaza.
Ukuwabukela kuphi ama-Olimpiki eLondon 2012?
Thola ukwehla emzuzwini ngamunye weMidlalo lapha Nakhu: Amasongo ama-Olimpiki akhanya eTower Bridge, eLondon, ukulungiselela ukuqala kwama-Olimpiki aseLondon ngo-2012. (Ufuna ukuhlela ukubuka kwakho kweLondon 2012?
Ayini amadolobha azosingatha ama-Olimpiki asehlobo ka-2012?
Ngo-15 Julayi 2003, umnqamulajuqu wamadolobha anentshisekelo yokuletha amabhidi kwiKomidi Lamazwe Lama-Olimpiki (i-IOC), amadolobha ayisishiyagalolunye ayethumele amabhidi okusingatha ama-Olimpiki Asehlobo ngo-2012: iHavana, i-Istanbul, iLeipzig, iLondon, iMadrid, iMoscow, neNew York City, EParis, naseRio de Janeiro.